Global Voices teny Malagasy » Myanmar: Pôlitika vaovao mitaky ny fisoratan’anaran’ireo vondrona miady amin’ny VIH · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Septambra 2009 6:09 GMT 1	 · Mpanoratra tan Nandika Candy
Sokajy: Myanmar (Birmania), Fahasalamàna, Vonjy Voina
Ny HIV Information for Myanmar (HIM) dia nanoratra lahatsoratra  momba ny fanovàna vao haingana ny pôlitika mikasika ny fitsanganan'ireo vondrona eo anivon'ny tambajotram-baovao People Living with HIV (PLHIV) – ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH.
Nampian'ilay mpanoratra taratasy  avy amin'ny Solombavambahoaka Tale Jeneralin'ny Sampana Fitiliana Aretina eo ambany fahefan'ny Ministeran'ny Fahasalamana, ho an'ireo Mpitsabo-Lehibe [médecin-chef] ao amin'ny Tarika mpitily sy mpanara-maso ireo areti-mifindra azo amin'ny firaisana ara-nofo sy ny VIH.
Mitsangana manerana ny firenena sy fari-piadidiana maro izao ireo tambajotra PLHIV mba ho fanampiana amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny VIH/SIDA. Amin'ny fanatanterahana izany, tokony hiasa eo ambany fanaraha-mason'ny Tarika mpitily sy mpanara-maso ireo areti-mifindra azo amin'ny firaisana ara-nofo sy ny VIH, ka tsy misy antony tokony hitondràna anarana samy hafa. Raha te-hiasa amina anarana hafa ny Vondrona dia hila manoratra anarana isan'ambaratonga any amin'ny kaominina, Faritany, sy any amin'ireo Filan-kevitry ny firenena/fari-piadidiana ho an'ny Fandriampahalemana & Fandrosoana, ary ny Minisiteran'ny atitany, mifanaraka amin'ireo lalànan'ny famoronana fikambanana.
Nametraka izao tsikera  izao ny mpamaky tsy mitonon'anarana iray:
Raha tena mizotra marina ho amin'ny demokrasia ny governemanta, ho tia ny olony aloha. Tena zava-dehibe ny fandraisana anjara ho an'ny tena fandrosoana. Firy ny mpiasan'ny NAP manerana ny firenena? Manana olona ampy ve ry zareo ho ana marary 240,000 (izay no nosoratan'izy ireo, mety mbola betsaka : iza no mahalala?). Manana porofo ve ianareo fa tafiditra anatina raharaha pôlitika ny PLHIV? Hay kay nila nisafidy hanana fifandraisana amin'ny ART amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa fotsiny ry zareo.
Nisy mpamaky hafa namela tsikera  manazava momba ireo toetoetry ny fahasalamana any Myanmar. Nanoratra momba ny toe-piainan'ireo mararin'ny VIH any Myanmar koa izy:
Maro ny olona tratry ny VIH na mitondra ny tsimok'aretina any amin'ny Firaisamben'i Myanmar. Maro ireo mararin'ny VIH no tsy manana fahafahana amin'ny fitsaboana io tsimok'aretina io sy tsy ampy fitsaboana satria nijanona ny namatsy azy ireo ny ONG nikarakara azy ireo noho ny antony maro samihafa. Tena tsy ampy fanampiana [miraviravy tànana] ny olona any Burma na any amin'ny Firaisamben'i Myanmar. Olona very zo sy tsy henoin-teny ny any Burma. Tahaka ny gadra ao an-tanindrazany izy ireo na any am-ponja na tsia no misy azy.
Matahotra ny sasany sao dia ampiasaina “hifehezana” na hanimbana ny fahaleovantenan'ireo vondrona mpilatsaka an-tsitrapo any Myanmar ity pôlitikan'ny governemanta vaovao ilàna ny fisoratana anaran'ireo vondrona miady amin'ny VIH ity. Nisy mpamaky hafa koa naneho ny ahiahiny tanatina tsikera  mitodika amin'ireo olana lalovan'ny ONG taorian'ny Hetsi-panovàna Saffron tamin'ny taona 2007.
…. Ny fifanampiana sy ny fifanohanan'ny tsirairay dia fototra lehibe sy zon'olombelona tsy ilàna fieràna na amin'iza na amin'iza. Ny famporisihana sy ny fanamoràna ny fananganana vondrona ifanampiana hiatrehana ny VIH no fantatra fa fomba tsara apetraka sy ampiasaina erantany ho tetezana sy tetikasa loharanom-pikarakarana ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH. Ny matihanina amin'ny resaka fitsaboana dia samy mahatsapa fa ny femehipehezana ny fahafahan'ny isam-batan'olona hahazo fiahiana ara-pahasalamana dia midika fandikana ny [ethic] foto-pisainan'ny asa fitsaboana. Tanatina krizy mangina ireo ONG iraisam-pirenena misahana ny lamin'asa ara-pahasalamana efa ho 5 taona izao, indrindra indrindra taorian'ny Septambra 2007. Naato ny MOU-n'izy ireo [avy amin'ny mpandika : fahazoan-dàlana angamba ity] raha tsy mankato ny torolàlana hanena ny isan'ireo tetikasany ry zareo. Ny NAP dia nody niara-niasa tsara tamin'ireo ONG eny an-toerana sy maneran-tany amin'ny fananganana Tetika Stratejika Nasionaly ho an'ny VIH/SIDA ary amin'ny fanatratrarana ireo tanjona any amin'ireo kaominina natao ho laharampahamehana niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka. Taorian'ny hetsika tamin'ny Septambra, napetraka ho anatina volavolan-damin'ny tafika ireo lamin'asa ara-pahasalamana rehetra. Tsy firaharahiana ny olan'ny hafa, fa fikarakarana feno ho an'ny fandriampahaleman-dry zareo. Miha-maro hatrany ireo ONG avy ao an-toerana sy iraisam-pirenena no asaina manena ireo faritra iasan'izy ireo. Somary sarotra ho an'ireo matihanina amin'ny sehatry ny fahasalamana ny mampita izany toro-hevitra mifanohitra amin'ny foto-pisainana [unethical] izany amin'ireo mpiara-miasa aminy, ireo ONG iraisam-pirenena mijery ny maha-olona. Na dia teo aza ilay taratasy fandraràna vao haingana, toa matoky tena sy mahazo aina ireo matihanina amin'ny sehatry nyfahasalamana avy ao amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana [DOH] amin'ny fiàlana ny baiko tahaka ity amin'ny olona miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA, izay tsaboin'izy ireo. Tsy amin'ny maha-marary azy ireo intsony no hijeren-dry zareo ireo olona miaina miaraka amin'ny VIH/SIDA, fa toy ny hoe loza ho an'ny fahamarinan-toerany sy ny fidiram-bolan'ireo mpiasa ao amin'ny DOH…..
Araka ny lahatsoratra an-gazety  avy amin'ireo Mpitsabo Tsy Manana Sisintany (Medecins Sans Frontieres) tamin'ny 25 Novambra 2009, eo amin'ny olona 240000 no eritreretina ho mitondra ny tsimok'aretina VIH/SIDA any Myanmar. Amin'izy ireo, 76000 no mila fitsaboana ‘anti-retro-viral’ maika, ary latsaky ny 20% amin'izy ireo ihany no afaka mahazo izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/09/16/3422/
 lahatsoratra an-gazety: http://doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=3200